बुद्धलाई बोकेर हिड्छन्
सुरु गर्छन्-ताण्डब नृत्य
यो शिक्षा र कार्यान्वयन
विपरित हो कि
संसारको चमत्कार हो!
आगो उड्न थाल्छ
पानी हिड्न थाल्छ
हावाको बगाइलाई खै के भन्ने?
जब सरीशृप नै उठेर हावासँग नाच्न थाल्छ
मान्छेले बुद्धलाई भेटेनन्
कि भेटेर पनि चिनेनन्?
नत्र मान्छेले भन्थे होलान्- 'तिमी बुद्ध होइनौ, कायर हौ'
बुद्धले पनि मान्छेलाई भेटेनन्
नत्र बुद्धले मान्छेलाई भन्थे होलान्- 'तिमी मान्छे होइनौ,गोही हौ।'
यो आरोप र प्रत्यारोप बीच
सूर्य र समुद्र साक्षी भएर
सत्य निरुपणको बहस हुँदैछ
माटोलाई मुठ्ठीमा कस्ने मान्छे कठघरामा उभ्याउन
सबै प्राणी नारा लगाई रहेछन्-
द्वैध चरित्रको अन्त्य होस्।